Iilogo zemivalo: iingcamango ezilungileyo kunye nemizekelo yokuyila eyakho | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | 02/05/2022 16:09 | Idizayini yeMifanekiso, ngokubanzi
Umthombo: Ikhitshi kunye neWayini
Zonke iivenkile zokutyela zinophawu oluzichongayo, ezibenza zibe zodwa, olu hlobo lwenziwe ngothotho lweelogo ezibaluleke kakhulu ukuba sithetha ngomfanekiso.
Ngenxa yesi sizathu, kubalulekile ukuba uthathele ingqalelo ezinye iimpawu ezisisiseko ukubaKufuneka kuthathelwe ingqalelo xa uyila ilogo yebha yakho, indawo yokutyela okanye nayiphi na indawo yokutyela. Nangona kunjalo, kule post, siza kuchaza indlela yokwenza ngamanyathelo alula kunye neengcebiso.
Kodwa ezi ngcebiso aziyi kusinceda kuphela ukuba senze uphawu oluthile lwecandelo lokutyela, kodwa luya kuba kulo lonke uhlobo lwecandelo olufunayo, okanye ukuba umxhasi ucela.
1 Iimpawu kunye nemisebenzi yelogo: ukubuyisela
1.1 Amacandelo abophayo
1.2 amalungu ahlulayo
1.2.1 Imibala yenkampani
1.2.2 ukuchwetheza kweenkampani
1.2.3 uhlobo lwelogo
1.2.4 Ucwangciso lwemidiya
1.2.5 Ukufakwa kweBrand
1.2.6 Incwadi yesazisi
2 Imizekelo yeelogo zebha
2.2 indlu eDublin
2.3 Ibar yeemayile enye
Iimpawu kunye nemisebenzi yelogo: ukubuyisela
Xa sisithi siza kuyila uphawu oluthile, kuyimfuneko ukugcina engqondweni izinto ezininzi okanye amanqaku ahlalutyayo kwaye anenjongo kumsebenzi wethu. Ngenxa yesi sizathu, siye sahlulahlula eli candelo libe ngamacandelo amaninzi, okuya kukunceda uqonde ngcono kakhulu. ungaqala njani ngenkqubo yokuyila ilogo yakho.
Kule meko siye sahlula icandelo laba ngamacandelo amabini: kwelinye icala sinalo okanye sifumane ezo izinto ezidibanisayo kwaye kwelinye icala ezo zahlulahlulayo ukuzahlula kwabanye. Nokuba yeyiphi kula macandelo mabini inomdla wokuthathela ingqalelo, kuba yenziwe zizinto ezithi, ngokuhamba kwexesha, zenze ilogo yebha yakho isebenze ngokupheleleyo.
Ubulula sesinye sezitshixo ekufuneka uzigcine engqondweni nanini na xa uqala ukuyila. Ilogo okanye uphawu lwakho kufuneka lucacise kangangoko. Amaxesha amaninzi siye sithande ukulayisha ngaphezulu uyilo ngezinto ezingathethi nto, ngale ndlela sifumana kuphela ukuba uluntu olusibonayo aluyiqondi into esiyithethayo kolo yilo. Ngesi sizathu, ukulula kufuneka kuhlale kugcinwe engqondweni, okukwabizwa ngokuba yi-minimalism effect: ukuthetha kakhulu ngokuncinci.
Ngokuqinisekileyo sele uvile ukuba iilogo kufuneka zithe tyaba kuyilo lwazo. Inyaniso kukuba ayisiyonto emiselayo, kodwa iyenza ibe nomtsalane ngakumbi. Kukhethwa ukuba uphawu luthande ukuthe tye ngenxa yendawo yalo. Nangona abaqulunqi abaninzi ngakumbi bebheja kwindawo ethe nkqo kwiimpawu zabo. Kule meko, njengoko iluphawu lwebar okanye icandelo lokutyela, indawo ethe tye iya kuba ngcono.
Yenye ingongoma ekufuneka ithathelwe ingqalelo, yiba nobuchule kunye nentsusa. Into entle ngoyilo kukuba ngalo lonke ixesha siyila, sishiya uphawu koko sikwenzayo.Kungenjalo, umsebenzi esiwuprojekthiyo usenokungabi ngowobuqu njengoko kufuneka ubenjalo. Zama ukuba nobuchule, kwaye ngaphezu kwako konke musa ukuzinza kwinto yokuqala ekwaziyo ukuyenza ingqondo yakho, yiya ngaphaya koko ubucwangcise kwaye ungazibekeli mida.
Imibala yenkampani zizinto eziyimfuneko ewe okanye kufuneka zibe kwi-brand yakho. Ngokuqhelekileyo ziba nemibala emibini okanye emithathu, eyaneleyo ukuba i-brand yakho ibonakale kwaye ivelele kwabanye. Into eqhelekileyo kwicandelo le-gastronomic okanye i-hospitality iya kuba kukusebenzisa imibala eqaqambileyo kunye neyothusayo. Thatha ingqalelo imiba emininzi ofuna ukuyithetha malunga neshishini lakho: loluphi uluntu oluya kubhekiswa kulo, luhlobo luni lwebhari eza kuba yiyo, umzekelo, into ebusuku, imini, zombini, njl. Okanye, luhlobo luni lokutya okanye isiselo esiza kunikwa. Isenokungahambelani nemibala, kodwa xa sele ungene kwiprojekthi, uya kuqonda ukuba yonke into inxulumene.
Ukuba siqhubeka noluhlu lwezinto zenkampani, asinakukwazi ukuzishiya kwi-typography. Itypography yenkampani iya kuba yeyona imele ibhrendi yakho iyonke. Ngesi sizathu, kubalulekile ukuba ukhethe i-typography kakuhle kuba iya kuba yinto egxininiswe kakhulu kumfanekiso woyilo lwakho. Into eqhelekileyo kwezi meko kukusebenzisa ifonti ebethayo edibanisa kakuhle nombala. Kwakhona, Ngokuxhomekeke kwindlela oza kunxibelelana ngayo, inokuba yi-typography edlamkileyo okanye, ngokuchaseneyo, into ebaluleke ngakumbi.
Enye into ethathelwe ingqalelo kuyilo oza kuyisebenzisa, luhlobo luni lwelogo oza kuqala ngalo, uya kuba sele uyazi ukuba kukho iintlobo ezahlukeneyo: ilogo, imagotype, isotype, njl. Bonke, Banophawu olubenza bahluke kwabanye. Ke ngoko, amaxesha amaninzi kuyafuneka ukuba kusetyenziswe into ebonelela ngolwazi olungcono kwaye ngamanye amaxesha kuyimfuneko ukuyicinezela.
Khawufane ucinge ukuba sele udale ibhrendi yakho, yafakwa ekhompyutheni kwaye yakhiwe ngokugqibeleleyo. Ngoku lixesha lokufaka isicelo sentengiso okanye isigaba sokunyusa uphawu. Ukuthengisa kungena kudlala apha, ke kuya kufuneka wenze indawo yentengiso yebhrendi yakho. Njengomthetho jikelele, ixhaphake kakhulu ibar okanye iibrendi zokutyela ukuzithengisa ngemidiya ye-intanethi, oko kukuthi, i-akhawunti ye-Instagram okanye iphrofayili apho uchaza inkonzo oyinikezelayo, enye inxalenye yesazisi apho uthetha nge-brand, njl. Nokuba yeyiphi na indlela oyisebenzisayo, soloko uyenza ngesizathu.
Kwakhona sifumana ukufakwa kophawu kwinto yesibini. Kubalulekile ukuba uphawu lwakho lumelwe kwimvelaphi, le mvelaphi inokungathathi hlangothi ngokupheleleyo okanye, ngokuchaseneyo, ifoto. Kuyathakazelisa ukuyifaka kwimvelaphi yezithombe, kuba ngale ndlela unokudibanisa i-negative kunye ne-positive ye-brand yakho, oko kukuthi, i-brand yakho ibonwe emnyama, okanye emhlophe ekukhanyeni okanye kwimvelaphi emnyama, ngale ndlela uya kugqiba ukuba i-brand yakho iyasebenza kwisicelo eso. yenza, khumbula.
Kwaye okokugqibela kodwa okungancinci, sifumana iincwadana zesazisi ezibonwayo zeshishini. Ezi ncwadana zibonakaliswa ngu ziqulathe zonke izinto ezibalulekileyo kuyilo kunye nokumelwa kophawu oluthile. Apha kulapho bonke ubugcisa bokugqibela obunxulumene noyilo lwebrendi buboniswa khona. Kukho iintlobo ezininzi zeencwadana, zonke zilandela ipateni efanayo, ngokwemixholo, nangona ezinye zihluke kakhulu omnye komnye. Umzekelo, sinokuzifumana ngokobukhulu obuhlukeneyo kunye neemilo, eminye imiba nayo iyatshintsha, njengokucwangcisa imixholo.
Imizekelo yeelogo zebha
I-Guinness yi-brand yebhiya kwaye ngexesha elifanayo, ibha yebhiya ebonakaliswe ngokuthengiswa kweebhiya zase-Ireland. Okwangoku, olu hlobo lwebar luhanjiswa kwizixeko ezahlukeneyo zamazwe ahlukeneyo. Eyona nto ibonakalisayo ayizizo iintlobo ezininzi zeebhiya ezizinikezelayo kodwa uphawu lwayo. I-logo ebalaseleyo kwi-classic kunye ne-typography enzulu. Ukongeza, into ephambili yongezwa kwi-brand ngendlela yohadi. Ngokungathandabuzekiyo uyilo olulula kakhulu ukuchonga kunye nokwahlula.
Okwangoku kukho olunye ukhuphiswano olufana kakhulu, njengoko kunjalo ngeDublin House. I-Dublin House yenye yeebhari kunye nee-pubs ezithengisa iibhiya zaseIreland kunye nezaseJamani. Inkalo ethandeka kakhulu luphawu lwayo, kuba iphinde imelwe ngochwethezo oluqhelekileyo, kwaye imibala esetyenziselwe uphawu iyamangalisa.
Ngokuqinisekileyo luyilo olusebenzayo ngokupheleleyo. Ukongeza, kukwagxininiswa ukuba olu hlobo lweshishini lusasazwa kwezinye iikona zamazwe amaninzi, oluququzelela ukuthengisa okungcono.
Ibar yeemayile enye
Umthombo: Uyilo lwabantu abaninzi
Ibha enye ye mille luyilo lwebha lwangoku. Uyilo lwayo lubalasele ngokuba luqulethe i-sans-serif typography edibanisa kakuhle kakhulu nento efuna ukunxibelelana nebrendi. Ibha esecaleni kwendlela eqhelekileyo kodwa enenkangeleko yangoku ngakumbi nehlaziyiweyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, uyilo olungahambi ngokunganakwa kwaye oludlala kakuhle kakhulu ngemibala yenkampani esetyenzisiweyo, ezinye izithunzi ezimnyama kakhulu, kwaye ziphuma kwi-chocolate emdaka kunye ne-ocher brown. Ngaba ungazama ukuyizama nje ngomfanekiso wayo?
Uyilo oluninzi lusetyenziselwa icandelo lokubuyisela, kangangokuba amaxesha amaninzi asikwazi ukuqalisa iprojekthi yolu hlobo ngaphandle kokucinga kuqala malunga nento yokuqala ekufuneka siyithathele ingqalelo.
Ukuyila uphawu lwebha okanye indawo yokutyela ngumsebenzi onzima ukuba awusebenzi kakuhle kwasekuqaleni. Ke ngoko, kubalulekile ukuba unkqaye eminye imiba esikubonise yona, njengoko iya kukunceda wazi ukuba ungaqala njani.
Siyathemba ukuba ufunde ngakumbi malunga noyilo lwebrendi, ngakumbi kweli candelo likhoyo kakhulu yonke imihla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » iilogo zemivalo
Uzenza njani ii-emoticons kwi-Twitch